Boliska: waxaan ku tuhmeynaa wiilka in la dilay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boliska: waxaan ku tuhmeynaa wiilka in la dilay
Publicerat måndag 22 augusti 2016 kl 15.52
Boliska ayaa tuhmaye in qoyska wiilka ka geeriyoodey bomb gacmeed gurigooda lagu soo tuuray.
Wiil sideed jir ah ayaa subaxii isniinta u geeriyoodey qrax lagu soo tuuray gurigooda oo ku yaala xaafadda Biskopsgården. Boliska ayaa sheegay in guri qarax lagu soo tuuray ay ku sugnaayeen carruur badan iyo waalidkooda.
- Wiilka geeridiisa waxaa tuhmeynaa in ay salka ku heyso dil. Hadda baaritaan ayaa ku heynaa waxa ku qarxay. Guriga waxaa ku suganaa carruur aad u badan iyo dad qaan-gaar ah. Waa nasiib wanaag in qasaaraha uusan intaa ka badan inkastoo wiil yar ku geeriyoodey balse qasaaraha intaa waa ka badnaan karay, ayuu yeri afhayeenka boliska gobolka Göteborg Hans Lippens oo saxaafadda ugu warameyey guubta qaraxu ka dhcay.
Boliska ayaa dadka ugu baaqay in la soo xiriiraan oo ay u soo gudbiyaan waxay arkeen, si looga hortago dhibaatadu in ay intaas ka sii badato.
- Gurigan qarax loo geystay waxaa ku qornaa mid ka mid ah wiilashii dhawaan loo xukumay dhacdadii xabadeynta aheyd ee loo geystay maqaaxida Vårvärderstorg oo iyana ka dhacday Göteborg sannadkii hore. Balse boliska ayaa baaraya in falkaan xiriir la leeyahay aargudasho, ayuu yeri afhayeenka boliska